कसरी छुटकारा पाउने पेट फुल्ने वा डम्म हुने समस्याबाट ? थाहा पाउनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
जीरा पानी पिउनुका ८ स्वास्थ्यबर्धक फाईदा
जीरा पानी बनाएर पिउनाले स्वास्थ्यका लागि निकै नै लाभदायिक हुन्छ । यसमा हुने एन्टीअक्सिडेन्ट्स, आइरन, कपर, पोटासियम र म्याग्नेसियले शरिरलाई धेरै समस्याबाट बचाउँछ ।
१. दिनहुँ बिहान खाली पेटमा पिउनाले पेट फुल्ने र एसिडिटीको समस्या कम हुन्छ ।
२. जिरा पानीले पाचन प्रक्रिया सहज बनाउँछ, कब्जियतबाट बचाउँछ ।
३. दैनिक जीरा पानी पिउनाले शरिरको तौल घटाउँन मद्धत गर्छ ।
४. पिसाब रोग र पत्थरी भएमा जीरा पानीलाई औषधीको रुपमा प्रयोग गर्नु लभदायिक हुन्छ ।
५. जीरापानी पकाएर सखर हालेर चिया झै दिनमा ३/४ पटक खाएमा ज्वरो चट्टै जान्छ ।
६. जिराको पानीमा आइरन प्रशस्त पाइन्छ। नियमित शरिरमा हुने रगतको कमीको समस्या टाढा राख्छ ।
७. जिरा पानीले टाउको दुख्ने समस्यामा कमी ल्याउँछ ।
८. जिरा पानीले रगत प्रवाह ठिक राख्दछ। साथै हात खुट्टा बाँउडिने समस्या कम गर्छ ।
अन्न नलीबाट खाना जाने बेलामा केही खुकुलो हुने यो मासंपेशी अरु बेलामा साँघुरिएर बस्छ । यसको विशेषता भनेकै खाना एकतर्फी रुपमा पास गर्ने हो ।
तर कतिपयको अन्ननली र आमासयको बीचमा हुने भाग सामान्य अवस्थाभन्दा बढी खुकुलो भएकाले यस्तो समस्या हुन्छ । हर्निया भएका मानिसहरूको पनि आमासयको माथिल्लो भल्भ खुकुलो भएर अमिलो पानी आउने समस्या हुनसक्छ।
त्यसले गर्दा भल्भ खुकुलो भएर अमिलो पानी आउने लक्षण बढ्छ । अर्को कारण गर्भवती अवस्थामा हुने हर्मोनको गडबड हो । त्यसले पनि अमिलो पानी आउने, वाकवाकी लाग्ने बनाइदिन्छ।
कसैलाई पहिलो ३ महिना हुन्छ भने कसैको अवधि ९ महिनासम्म पनि जानसक्छ । यस्तो लक्षणले आत्तिनुपर्ने कुनै कारण त छैन । तर कतिपय महिलाहरूलाई भने कुनै खानेकुरा नखाने, पानी पनि नरहने भएकाले जलविनियोजन डिहाइड्रेसन भएर अस्पताल भर्ना गर्नेसम्म पनि हुनसक्छ ।
तर अधिकांशको पहिलो ३/४ महिनापछि कम हुँदै जान्छ । त्यस क्रममै कतिपयलाई यति धेरै अमिलो पानी आइदिन्छ कि कुनै औषधिले पनि छुँदैंन ।
आमाशयमा अम्ल बस्न नै अनुकुल संरचना हुने भएकाले त्यहाँ अम्ल रहँदा हामीले असजिलो महसुस गर्दैनौं । तर अन्ननली, मुख आदि अंग त्यस्तो अंम्लसँग सम्पर्क नहुने भएकाले त्यससँग लड्ने संरचना हुँदैन र अम्ल ती अंगमा पर्नासाथ हामीले पोलेको महसुस गर्छौं ।
पेट सफा गर्ने सजिलो घरेलु उपचार !
यसले पेट भद्दा हुने मात्र होइन, रोग पनि निम्त्याउँछ । कब्जियत हुनुको पछाडि यस्तै कारण लुकेका हुन्छन् । त्यसैले मल त्याग गरिसकेपछि पेट सफा हुनु जरुरी छ । विशेषज्ञका अनुसार बिहान पेट सफा नहुनुको कारण हाम्रो खानपान र दिनचर्या हो ।
यदि हामी समयमा स्वस्थकर खाना खान्छौं भने कुनै औषधी नखाई पनि समस्या समाधान हुन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राति सुत्नुभन्दा तीनघन्टा अगाडि नै खाना खाइसक्नुपर्छ । अन्यथा क्यालोरी बर्न हुन पाउँदैन ।
Don't Miss it सफल जीवनका लागी जान्नैपर्ने १० प्रेरक भनाईहरु (भिडियो सहित)
Up Next खाली पेटमा दूधमा तुलसीको पात मिलाएर खाएमा फाइदा, तर तुलसीको पात चपाउनुहुँदैन – जान्नुहोस् के गर्ने के नगर्ने ?
याे चक्लेटले डिप्रेसनकाे जाेखिम घटाउन सहयाेग गर्दछ, जान्नुहाेस्
डार्क चकलेट खाँदा मुड फ्रेस गराउन र शरीरलाई सकरात्मक उर्जा दिन्छ । जसले डिप्रेशनको सम्भावना कम गर्ने विज्ञहरुले बताएकाछन् ।…
3 months ago Sandip